အီကွေဒေါနိုင်ငံရှိ မီးတောင်ပေါ်မှ ဆီးနှင်းရေခဲတုံးများ ပြိုကျခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံးလူ ၄ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
အီကွေဒေါနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Chimborazo မီးတောင်ပေါ်မှ ဆီးနှင်းရေခဲတုံးများပြိုကျလာပြီးနောက် အီကွေဒေါအရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများအားအခင်းဖြစ်နေရာ၌ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက် )
ကွီတို ၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီကွေဒေါနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည့် Chimborazo မီးတောင်ပေါ်မှ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် ဆီးနှင်းရေခဲတုံးများ ပြိုကျလိမ့်ဆင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၄ ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဖွဲ့စုံပေါင်းစပ်မှုလုံခြုံရေးဌာန(ECU 911) က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့် ၆,၁၀၀ မီတာကျော်ရှိသော မီးတောင်ကြီးအား တက်ရောက်နေသည့် လူ ၁၂ ဦးပါ တောင်တက်အဖွဲ့တစ်ခုသည် ဆီးနှင်းရေခဲတုံးများ ပြိုကျလာမှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ်(ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၁၁၃၀ နာရီ)တွင် အဆိုပါ မတော်တဆဖြစ်မှုသတင်းပေးပို့ချက်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက် အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့
၏ အထူးကယ်ဆယ်ရေးများအဖွဲ့ ၊ ဒေသဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန နှင့် ရဲရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကို အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ချက်ချင်းစေလွှတ်ကာ တောင်တက်သမားများကယ်ဆယ်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ၎င်းတောင်တက်သမားများသည် မည်သည့်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမီးတောင်အား ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းရံထားသည့် တောင်ခြေရှိ Chimborazo Fauna Production Reserve တောင်တက်စခန်းကို လတ်တလောပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Chimborazo မီးတောင်သည် အီကွေဒေါနိုင်ငံတွင် အမြင့်ဆုံးတောင်/မီးတောင် တစ်လုံးဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့် ၆,၂၆၃ မီတာရှိသည်။ ယင်းတောင်ထိပ်သည် ဆီးနှင်းများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများအား အထူးစွဲဆောင်ထားသည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
At least4dead in avalanche on Ecuador’s volcano
QUITO, Oct. 24 (Xinhua) — At least four people were killed on Sunday by an avalanche on the Chimborazo volcano in central Ecuador, said the country’s Integrated Security Service ECU 911.
Chimborazo is the highest volcano and mountain in Ecuador, withaheight of 6,263 meters above sea level. Its snow-covered peak isapopular summit for local and foreign climbers. Endite
Photo- Directors with Ecuador’s emergency services coordinate rescue operations following an avalanche on Chimborazo volcano on October 24, 2021